Momba anay - Huizhou Vivibetter Packaging Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter fonosana Co., Ltd.
HuiZhou VIVIBetter fonosana Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2015 niaraka tamin'ny fampiasam-bola 1 tapitrisa yuan. Misy mpiasa maherin'ny 50, ao anatin'izany ny teknisianina 5 ao amin'ny orinasa manana 1000 metatra toradroa, izay nahatratra 5 miilion yuan ny sandan'ny vokatra isan-taona. Azontsika atao ny manome serivisy manomboka amin'ny famolavolana, fanontana hatramin'ny fanodinana lahatsoratra.
Ho fampivoarana tsaratsara kokoa, ny VIVIBetter dia hanavao sy hanavao tanteraka amin'ny fanamafisana ny fifaninanana sy ny fitaomana azy. VIVIBetter dia manindry ny politika momba ny kalitaon'ny fandraisan'anjaran'ny mpiasa iray manontolo, manatsara ny fivoarana ary mitazona ny fanoloran-tena ho an'ny mpanjifa tsirairay. Izahay dia manangana rafitra fiantohana kalitao ISO9001 sy rafitra fitantanana tontolo iainana ISO14001. VIVIBetter dia nahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fitantanana siantifika sy mahomby, vokatra avo lenta, vidiny mirary, tolotra ara-potoana sy mahomby, ao anatin'izany ny serivisy OEM sy ODM.
Ny vokatra lehibe ao amin'ny VIVIBetter dia misy karazana fonosana PET sy Textile, kitapo tsy misy rano, kitapo tsy tantera-drano, kiraro tsy misy rano ary fonon-tànana vita amin'ny landihazo .mt. Lamba famaohana ary kitapo fiantsenana isan-karazany sns. Manao vokatra mifanaraka amin'ny PDF na AI avy amin'ny mpanjifa na famolavolana ho azy ireo izahay raha ilaina izany.
Ny tsena iraisampirenena no sahan'ady lehibe indrindra eto amintsika .ny totalin'ny fividianana entana avy any ivelany dia mitazona ny 80% -n'ny orinasam-pandraharahana. Manantena izahay fa hanolotra entana kalitao tsara indrindra ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao.
Ny teny filamatray dia. "Ny mpanjifa no andriamanitsika ary ny kalitao no natao voalohany .Misaintsaina ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra. Vahaolana ny laharam-pahamehana."